Uncategorized | Zizawa's refuge | Page 2
a bit ofasick joke to our consumer culture
A tooth-brush salesman came back to the depot without being able to sellasingle tooth-brush. His line manager screamed…, ‘Notasingle one sold? Damn it! What’s yr salespitch?’. salesman: What’s salespitch? manager: Well, it’sasort of gimmick that makes your customers want to buy your products. salesman: Ok, i’ll get one tomorrow. … Continue reading →
Posted by zizawa ⋅ 23/06/2010 ⋅ 51 Comments
တကယ်တော့ ဒါကို ရေးသင့်မသင့် ချိန်နေတာ ကြာပြီ။ ခုတကယ် ချရေးဖြစ်တာတောင် ဒါကို ရေးသင့်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား မရှိလှဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးလိုက်မိပြီ.. ကိစ္စက စန္ဒယားလှထွတ်ရဲ့ သီချင်းတပုဒ်နဲ့ဆိုင်တယ်။ ‘အချစ်သည် ပို၍ဝေးသောအခါမှ ပိုသိသည်၊ ဒီဆိုစကားကို ကိုယ်ကြားဖူးသည် ဖြေမဆည်…ဝေးပြီ မကြင်လို့တော့ မဟုတ်ပြီ…’ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ စန္ဒရားလှထွတ်သီချင်းတွေကို ကျွန်တော်သိပ်ကြိုက်တယ်။ သူ့ကိုလည်းလေးစားတယ်။ တူရိယာပိုင်းမှာ၊ နောက် composition အပိုင်းမှာ မြို့ မငြိမ်းထက်လည်း ဆန်းသစ်တယ်၊ sophisticated ဖြစ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ အမြင်ကျဉ်းတယ်ပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူရေးမှန်း မသိတဲ့ ‘မောင်တို့ချယ်ရီမြေ’ ဆိုကော်ပီကြီးမို့ နားကိုမထောင်ချင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ဒီနိုင်ငံမှာဆို ဖွင့်ကို မဖွင့်ဘူး၊ ရှက်လို့။ ဇော်ဝင်းထွတ်တို့၊ မေဆွိတို့ အင်္ဂလန်မှာ သီချင်းလာဆိုရင် … Continue reading →
Posted by zizawa ⋅ 05/08/2009 ⋅3Comments
မကေက တက်တော့ ရေးစရာတခုရသွားပြန်ရော။ ကျေးဇူးပါ မကေရေ့။ တွေးနေမိတာ- အများကြီးပဲ။ – ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆင်ခြင်မိတာက- ကိုယ့်ရဲ့ principles တွေကို compromise မလုပ်မိစေဖို့။ သိပ်ကြီးကျယ်သွားပြီ :o) – ကျန်းမာရေး- ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပဲ။